Oromo News 07.13.21 | KWIT
Sioux City Democrat J.D. Scholten akka jedhetti guyyaa har’aa yeroo kaluudhaf akka biirodhaf hin dorgamne himee jira. Dhugaan, guyyaa har’aa Scholten garee progressive lolaa kan baadiyaati argamuu waliin akka dalagaa jalqabu hime. Tabataan baseball kan duraani fi paralegal waradaa Iowa 4ffaa keessati bakka buaa naaninacha Steve King bara 2018 hin jifachuun isaa beekamadha. New York time akka gabaaseti Scholten governor US kan dorgomee fi U.s senate bara 2022 tti. Inni durabu’ummaa kan Ruralvote.org fudhachuu jira, baaye PAC kan itti xiyyeefate naanawa baadiyaati harka Democratic baayisuf akka tae hime.
Jiraattoni Iowa jum’aa dhuftu irraa jalqabee waae talaali Covid-19 irraa filannoo ufiin filachuu kan qaban akka tae himan. Department mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti makiina sochaasu irra bakka himuu fi jiraattini Iowa xaabiya 125 irraa talaali meesha manatti akka fudhachuu danda’an himan.
Operational test lamaan kan Des Moines fi Dacenport argamuu guyyaa jimaata akka cufamu himan.
Omaha fi naanicha kan argaman hojattooni ammas guyyaa kibxta bubbee cimaadhan erga jiganii guyyaa afur booda Omaha keessati namni baayina qaban human electric hanga qaban akka gadi dhiisanif kibxata hojachuu akka jiran himan. Omaha Public Power District akka jedhaniti hanga har’a halkan qixxeeti maamiltoota 27,000 taa’anif kan gad dhiifamu akka tae himan.